Manazava ny dikan'ny tranonkala ny tranonkala
Ny fandotoana tranokala dia ny dingan'ny famoahana angona betsaka avy amin'ny vohikala samihafa mampiasa fitaovana antsoina hoe tranokala . Ny tahirin-kevitra fanampiny dia azo voavonjy ao amin'ny ordinatera voatondro na toerana hafa. Azo atao ihany koa ny mamonjy azy amin'ny tahiry anaty tabilao na tabilao.
Ny votoatin'ny ankamaroan'ny tranonkala dia azo jerena amin'ny fampiasana navigateur web. Tsy afaka mamonjy dika mitovy amin'ny fampiasanao manokana ianao. Ny hany safidy dia ny haka kopia ny votoaty ary hametaka azy any an-kafa. Ankoatra ny maha-reraka sy mahakivy, dia mandany fotoana ihany koa. Alao sary an-tsaina hoe tsy maintsy kopianao daholo ny votoatin'ny tranonkala iray 200. Haka fotoana be izany!
Na izany aza, ny fanasitranana tranonkala dia fomba iray ahafahana manamboatra io dingana io. Raha tokony ho ilay kopia an-tserasera, ny rindrambaiko web na ny tranokala dia tsy maintsy manao ny asa ao anatin'ny fotoana fohy. Izany dia hamonjy anao ny fanaintainana, ny ezaka ary ny fotoana.
Ny rindrambaiko dia manana fahafahana hanaparitaka singa samihafa amin'ny angona avy amin'ny tranonkala maro amin'ny tranonkala samihafa amin'ny fangatahanao. na ny tranokala, na ny tranokala hafa na ny tranonkala, ary ny iray hafa, izay azonao ampiasaina hiasa miaraka amin'ny tranonkala. 3)
Noho ny habetsaky ny vidin'ny rindrambaiko novolavolaina dia avo dia avo, maro dia maro no te handeha hanodina rindrambaiko maimaim-poana, nefa koa manana ny tsy fahombiazany ireo.
Ity dia toerana ahafahan'ny WebHarvy ampiasaina mba hiatrehana ireo fahasarotana mitranga amin'ny fampiasana ny tranokala malaza indrindra. dia manolotra tsindrim-peo, tsindrimandry ary tsindrio abidy. Amin'ny WebHarvy, fanangonam-baovao avy amin'ny tranonkala dia resaka minitra vitsy monja.
Ity fitaovana ity dia misy horonantsary misy horonantsary izay mampiseho fa mora ny manangana azy ary ampiasaina amin'ny filànao ny zavatra ilaina. Rehefa avy nijery ilay horonan-tsary ianao, dia hianatra ny fomba tsotra ny hevitra sy ny tsindrio ny interface. Ny tena dikan'izany fitaovana izany dia ny hoe tsy mitaky koditra izy io. Azonao atao ny manamboamboatra ny angona avy amin'ny tranonkala miaraka amin'ny tsindry vitsivitsy amin'ny totozy. Mba hisafidianana ireo angona azo noforonina, dia mila manondro ny soso-kevitrao fotsiny ianao. Azonao atao ny manombatombana ny fanombatombanana azy, ary afaka mijery ny horonan-tsary koa ianao Source .
Ny antony tokony hiezahanao WebHarvy:
Ny maha-varo-bary dia mora kokoa noho ny fomba amam-pitaovana
Tsy misy fehezan-teny hananganana sy fampiasana ( 33)
Tena mora ny mampiasa izany na dia ho an'ny mpampiasa tsy teknika aza
Izany dia miaraka amin'ny versione évaluation sy lahatsary demo